Newa Times : चिसा कालिञ्चोककाे तताउने उकालाे
दोलखा भाषाको गीत याद आयो, “कालिन्चोकय् चिमाल स्वाँ मजान व्हयाच्वन……….” नलिना चित्रकार अनि दोलखाकै एकजना कलाकारले गाएका थिए । जुन गीत सुनेदेखि कालिन्चोक भन्ने ठाउँ कस्तो होला भन्ने हेर्ने उत्सुकता थियो । सन्जोगले ३ वर्ष अघि चैत्र महिना तिर हामी ९ जनाको ग्रुप कालिन्चोक जाने निधो गरी उतातिर लाग्यौं ।
बिहान ७ बजे आउनु पर्ने जिप नआएपछि फोन गर्दा थाहा भयो कि जिप त बिग्रिएर वर्कसपमा बन्दैछ ! जिप बनेर आउला नि भन्दै ग्वार्कोमा पर्खेर बस्यौं, ९ बजेसम्म पनि नआएपछि दाईले कोटेश्वर गएर जिप रिजर्भ गरी उतैबाट जाऊँ भन्नभएपछि हामी गयौं । खै के हो, कतै जान भनेपछि हामीलाई समस्या नै पहिला आउने रहेछ । समस्यासँग जुध्न सिकाएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ । एउटा जिप रिजर्भ गरेर दोलखा तिर हुँईंकियौं । दोलखा पुग्न ६ घण्टा लाग्ने कुरा थाहा थियो । हाम्रो गन्तव्य भनेको पहिला कालिन्चोक थियो, त्यसैले हामी कुरिबजार बस्ने निधो गरेका थियौं ।
अरनिको राजमार्ग हुँदै सूर्यविनायक भक्तपुर हुँदै हामी बनेपा पुग्यौं र एउटा होटलमा नास्ता खायौं । खाएपछि सीधै लाग्यौं दोलालघाट हुँदै कोदारी राजमार्गतर्फ । कोदारी राजमार्ग हुँदै पहिला तातोपानी, पलाञ्चोक भगवती गएको थिएँ ।
दोलखा पहिला पनि गईसकेको थिएँ । यो तेस्रो पल्टको यात्रा हो । खाँडीचौर पुगेर खाना खायौं । पहिला भए खोलामा गएर एकछिन आराम लिन मिल्ने ठाउँ थियो त्यहाँ तर २०७२ सालको भूकम्पले खोलाको वरिपरि फरक पारिसकेको रहेछ । खाँडीचौरको पुल कटेपछि बाटो चौडा गरिरहेकोले धुलाम्मे थियो । पहिला जादाँ पूरै पिच बाटो थियो, अब बाटो बनाउन अभैm केहि समय लाग्ने संकेत थियो । त्यहाँदेखि दोलखा नपुगुन्जेल बाटो उस्तै थियो, कतै कतै पिच हुँदै थियो ।
दोलखाको सदरमुकाम चरिकोट पुग्दा खुल्ला चौर देखियो, जुन पहिला जस्तै थियो भने त्यहाँ आधुनिक घरहरू धेरै बनिसकेको तथा होटलहरू पनि थुप्रै रहेको देखियो । चरिकोटबाट दोलखातिर नलागी हामी कालिन्चोक जाने बाटो मोडियौं, जुन बाटो पनि कच्ची थियो । जिपको झ्याल बन्द भएपनि धुलो भित्र छिरिरहेको थियो । बाटो त्यति राम्रो नभएकाले वर्षातमा यहाँ आउन ठिक नहुने बुझियो । चरिकोटबाट १ घण्टा उकालो ओरालो लागेपछि कुरिबजार आईपुग्यो । कुरिबजार पुग्दासम्म साँझ परिसकेको थियो ।
कुरि बजार कति चिसो रहेछ भन्ने कुरा राति मात्र थाहा पाईयो । रात परेपछि शीत झर्न थाल्यो । चिसोले सास फेर्न पनि गार्हाे हुँदै थियो । एउटा कोठामा ६ जना केटीहरू बसेका थियौं । खाना खाई सकेपछि सुत्ने तरखर ग¥र्यौं तर निन्द्रा लागे पो ! मेरो त सास नै रोकिएला जस्तो भयो । पछि पो थाहा भयो अक्सिजन कम भएको रहेछ । काठले बनेको उक्त लजमा सबै व्यवस्था राम्रो भए पनि ट्वाईलेट बाहिर थियो । ट्वाईलेट जानै अल्छि लाग्ने ! चिसोले गर्दा पानी त झन छुनै नसकिने ! भोलि बिहान कसरी त्यो पानीले मुख धुने भन्ने पो चिन्ता लाग्न थाल्यो ! तर एक जना भाउजु त्यही चिसो हिऊँ जमेको पानीले बिहान नुहाएको देखेर छक्कै प¥यौं । त्यति मात्र होइन उहाँ त राती पनि खाना नखाई दर्शन नगरी नखाने भन्दै आफुले ल्याएको एक पाथी बदामले बाटोभरी खाएर त्यहि बदामको भरमा रात गुजार्नु भयो । अझ उकालो चढेर माथि पुग्दा जुत्ता बिग्रिएर नांगो खुट्टाले हिंड्दै हुनुहुन्थ्यो, धन्न एकजना बहिनीले चप्पल एकजोर ल्याएकाले त्यही चप्पल लगाएर तल ओर्लनु भयो । भाउजुको भक्ति देखेर तिनछक्क पर्यौं हामी ।
बिहान ५ बजेतिर हल्लाखल्ला हुन थाल्यो कोही कोही त उठेर हिंडीपनि सकेका थिए । अँध्यारोमा टर्च बाल्दै कालिन्चोकको उकालो चढ्दै गरेको देखियो । हामी पनि हतार हतार तयार भयौं, किनकि घाम लागेपछि उकालो चढ्न गाहे हुने कुरा थाहा थियो । बिहान ६ बजे नै चिया खाजा अलि खाएर निस्किहाल्यौं ।
घाम लाग्नअगाडि आकाश सफा थियो । एक घण्टाको उकालो मात्र चढे पुग्ने थियो तर त्यो कालिन्चोकको डाँडा हेर्दा असाध्यै सुन्दर अनि ठाडो उकालो थियो । चिसो हुने थाहा पाएर मोटो विन्डफ्रुप ज्याकेट, स्वीटर, मोटो ट्राउजर अनि सल ओढेर गएको थिएँ । उकालो चढ्दै गएपछि गर्मीले ती लुगाहरू सबै फुकालौं जस्तो भयो । बिहान चिसो हुँदा च्यापेर राखेका ती लुगाहरू आफैलार्इ बोझ हुन थाल्यो ।
बिस्तारै ठाडो उकालो चढ्दै गयौं । लेक लाग्ने सम्भावना धेरै थियो, नभन्दै ५ मिनेट चढेको मात्र थिएँ गाह्रो हुन थाल्यो । लसुन एक पोटी मुखमा हाल्दै फेरि उकालो चढ्दै गएँ । बाटोमा ढुंगाको सिंढीहरू थियो, अनि ठाउँ ठाउँमा बिसौनी बनाइएको थियो, जसले गर्दा धेरै सजिलो भएको थियो ।
समुन्द्र सतहबाट ३,८८० मीटरमाथि टुप्पा पुग्नुअगाडि घुमेर जाने बाटो तथा फलामको मुख्य ढोका आईपुग्यो । त्यहाँ दुईटा पहाडलाई फलामको सिंढीले जोडिएको थियो । त्यहाँबाट अलि उकालो लागेपछि कालिन्चोक भगवती भएको ठाउँ आईपुग्यो । मन्दिर त थिएन तर त्यहाँ पीठ जस्तो थियो । जहाँ त्रिशुल, घण्टाहरू अनि लुङदाहरूले सजाइएको थियो । यस ठाउँमा हिन्दूहरू मात्र होइन बौद्धहरू पनि आ–आप्mनै उद्देश्यका साथ आउने गर्दा रहेछन् । भगवती नजिकै एउटा कुण्ड पनि रहेको छ जसलाई महादेव कुण्ड भनिन्छ । यहाँको पानी कहिल्यै सुक्दैन भनिन्छ । यो पानी भक्तजनहरूले घरमा लगेर छर्केमा राम्रो हुने विश्वास रहेछ । विशेष गरी चैत्र बैशाखमा यहाँ थुप्रै भक्तजनहरूको भीड लाग्ने गर्दछ । आफुले इच्छाएको पूरा हुने विश्वासका साथ मानिसहरूको भीड लाग्ने गर्दछ । बुढाबुढीदेखि तन्नेरीहरू पनि यस ठाउँमा आउने गरेको देखियो । पुष माघ महिनामा भने अत्यधिक चिसोका कारण हिउँ पर्ने हुनाले मानिसहरू हिऊँ खेल्न आउने गर्छन् ।
कालिन्चोक भगवती रहेको यस ठाउँबाट उत्तरतिर लस्करै सेता हिमाल मुस्कुराईरहेको देख्दा उकालो चढेर आएको थकाई सबै बिर्सिईंदो रहेछ । त्यति मात्र होइन पहाडको बनोटमा पनि भिन्न किसिमको आकर्षण थियो । जसले गर्दा प्रकृतिप्रेमी हरकोहीलाई मन्त्रमुग्ध बनाउन सक्थ्यो । झन हिउँ परेको बेला त यहाँको दृश्य नै बेग्लै हुँदो हो ! जे होस् कालिन्चोक पुग्ने मनको ईच्छा पुगेकोमा धेरै खुशी थिएँ । फर्कने बेला कालिन्चोकलाई व्याकग्राउण्डमा पारी एउटा सामूहिक फोटो खिचें । अनि तल ओर्लेर दोलखा भिमसेनको दर्शन गरी काठमाडौं फर्कें ।